China Impellers Vagadziri uye Vanotengesa | Retool
Impeller - Inoshandiswa zvakanyanya muvharuvhu nepombi indasitiri. Vatengi vane hwakasimba hunhu, kunyatso uye ekunze epasi kurapwa zvinodiwa zvigadzirwa, chigadzirwa chega chega chakanyatsopakurwa zvisati zvaendeswa. Kunyanya kune vakavhara impellers, iyo yakakanda mhando uye kuchenesa kweyemukati meganda vane zvakakwirira zvinodiwa zvekukanda tekinoroji uye nhanho. Isu tange tiri kupa vatengi vekunze kwemakore mazhinji, uye vatengi vanogutsa kwazvo nesu.
Chikumbiro: Fluid midziyo.
Simba redu: • Retool Kambani ndeyakagadzira yekudyara nekukanda mashandiro, iyo yakavambwa muna 1994. Iyo zvakare yekutanga batch yekururamisa mabhizinesi muChina. Inowanikwa muZhaoxian County, Shijiazhuang City, padyo ne Tianjin Port uye Qingdao Port, ine mafambiro ari nyore. Yedu zvigadzirwa chigadzirwa inovhara mavharuvhu, mavheji zvikamu, chikafu michina yezvikamu, pombi zvikamu, peturuleum indasitiri zvikamu nezvimwe .. Tinokwanisa kuburitsa zvinoenderana nesampuli kana dhiziri inopihwa nevatengi. Izvo zvigadzirwa zvine chimiro chakanaka, chakagadzikana uye chakavimbika mhando uye yakasimba quality control.
Yepfuura: Vibration Kusveta
Centrifugal Pump Inokanda Zvikamu
Kumanikidzwa Washer Pump Kukanda Zvikamu
Sump Pump Kukanda Zvikamu
Mvura Pump Inokanda Zvikamu
Stainlees Simbi Zvidimbu (Zvinoshanda Kuti Tambudza A ...